उदास र मलिन अनुहारकी युवती – BRTNepal
उदास र मलिन अनुहारकी युवती
केही दिन अघि मात्र निधन हुनुभएका साहित्यकार मनु ब्राजाकीको कथासंग्रह 'अन्नपूर्णाको भोज'बाट)
मनु ब्राजाकी २०७४ माघ २५ गते १:३९ मा प्रकाशित
एउटी रुपवती युवतीले रात्रिबसमा यात्रा गर्दा चनाखो हुनै पर्‍यो । दृष्टिको सजगतालेअनुहारको मलिनतालाई पखाल्न सकेको छैन, उसको सामु एउटा रात्रिसेवा बस उभिएको छ, जसमा अन्य यात्रीहरु चढ्दै आआफ्नो सिट खोज्दैछन्, ऊ पनि बसमा उक्लिन्छे र ढोकैनेरको आफ्नो सिटमा एक छिन झ्यालतिर बस्छे र पुनः ओर्लिन्छे काँधमा झुन्ड्याएको एयरब्याग सिटमा नराखेर काँधमा बोकेको बोक्यै ओर्लिन्छे, उसले काँधमा झुन्ड्याएको एयरब्याग अलि गरुङ्गो पतित हुन्छ । किनभने एयरब्यागको फित्ता उसको मांसल काँधमा किंचित गाडिएको छ उसले आफ्नो एयरब्याग सिटमा सहयात्रीको जिम्मा नछोड्नुको अर्थ हो त्यसमा कि त आफ्नो मनपर्ने सारै मूल्यवान वस्तु छ, कि त ऊ यात्रामा कसैको पनि विश्वास गरिहाल्नु हुँदैन भन्ने विचारले पेरित छे । यो रामो कुरा पनि हो । ऊ बसबाट ओर्लिएर सजगताका साथ बस ओरिपरि चनाखो दृष्टिले हेर्न थाल्छे । सम्भवतः कोही आउँदै पो छ कि ? तर बस हिंडुन्जेलसम्म कोही पनि आउँदैन ।
ऊ आफ्नो अधबैंसे सहयात्रीतिर पुलुक्क हेरेर झ्यालतिरको आफ्नो सिटमा बस्छे अन्ततः साढे ६ बजे बस काठमाडौँ गोंगबु बसपार्कबाट हिँड्छे अधबैसे सहयात्रीले देख्छ– उदास र मलिन अनुहार भएकी रुपवती केटी उसको छेउमा बसेकी छे ।
गोरो र भरिलो जीउडालमा रातो पहिरन सुहाएको छ । गलामा सुनको लकेटयुक्त चेन, कानमा टप र दाहिने हातको औंलामा सुनकै औंठी छ । सिट तल लत्रिएको गोडामा रातो हाइहिल जुत्ता छ । यस प्रकार मध्यमवर्गीय पहिरन र शृंगारमा सज्जित भएर सहयात्रीतिर होइन, बसबाहिर हेरिरहेकी छे ।
अधबैँसे सहयात्रीलाई चाहिं सबै कुरा त्यस युवतीमा सुसज्जित भए पनि एउटा कुरा नमिले झैं लागिरहेछ । त्यो के भने उसले एयरब्यागलाई तल आफ्नो गोडानेर राख्नुसट्टा काखमा लिएकी छे । त्यस अधबैँसेले ठट्यौलो पारामा सोच्यो, आजकाल मनीब्यागको सट्टा एयरब्याग काँधमा झुन्ड्याउने र काखमा राख्ने फेसन आएछ क्यारे !
‘म पनि विराटनगर जाँदैछु । ‘विराटनगर कहाँ जानुहुन्छ ?’ केही जवाफ आएन अनि त त्यस अधबैँसे सहयात्रीले परिचय बढाउन असंख्य प्रश्नहरु ग¥यो । तर कुनै प्रश्नको पनि जवाफ आएन । बरु उसले कति बेला हो खुट्टानेरको एयरब्याग टिपेर आफ्नो काखमा राखिसकेकी रहिछे एकोहोरो प्रश्न गर्दागर्दा त्यो सहयात्री अधबैँसे सिटमा ढल्कियो ।
अन्तिम पटक सिटमा ढल्किएर उसले प्रश्न गर्‍यो, ‘तपाईंको शुभनाम ?’ पुनः केही जवाफ आएन बरु मुग्लिङ आइपुग्यो । साढे दस बजेतिर मुग्लिङ बस पुगेपछि सबै यात्रीहरु खाना खान ओर्लिए । तरर ऊ आआफ्नो एयरब्याग काखमा राखेर सिटमा बसी राखी ।
दस, पन्ध, बीस, तीस अर्थात आधा घन्टा बित्यो । त्यो युवती आइन यात्रीहरु कराउन थाले । बस अन्ततः मुग्लिङ छोडेर नारायणघाटतिर हिँड्यो । अघि युवतीसँग बसेको अधबैँसे सहयात्रीले उसको उदास र सुन्दर अनुहार सम्झ्यो । पफ लगाएर निधारमा झारेको कपाल पनि सम्झ्यो अनि अझै सम्झ्यो, पक्कै भागेर माइती जान लागेकी चेली होली, यो एयरब्याग गहकिलै हुनुपर्छ उसले ब्याग आफ्नो कब्जामा लियो ‘हुँदैन, हुँदैन ए मिस्टर ! हामीले बुझाउनुपर्छ’ त्यो मैले चिनेको केटी हो । विराटनगरमा मेरै छिमेकी हो । म उसकै घरमा लगेर बुझाइदिन्छु ‘हुँदैन, हुँदैन’ भनेर कन्डक्टरले ब्याग ऊबाट लियो । नारायणघाट पुगुन्जेलसम्म कन्डक्टर र त्यस अधबैँसे यात्रीको वादविवाद चर्काचर्कीसम्म पुग्यो । उता मुग्लिङमा सिमसिम पानी परिरहेथ्यो (बुटवलतिरबाट मुग्लिङ आइपुगेको र अहिले काठमाडौँतिर हिँड्ने तरखर गरिरहेको बसको खलासी ढोकामा उभिएर गाउँदैथ्यो, ‘सिमसिमे पानीमा ज्यानले माया मार्छ कि जिन्दगानीमा’
रातो साडी चोलो लगाएकी, मलिन अनुहार भएकी, उदास सौन्दर्यले त्यस बसको खलासीलाई सोधी–‘काठमाडौँका लागि सिट छ ?’ खलासीले ट्वाँ परेर नियालेर हे¥यो र मनमनै राल चुहाउँदै भन्यो , ‘छ, छ सिट छ । म मिलाउँछु, झ्यालनिरै’ खलासीले देखाएको सिटमा गएर ऊ बसी । बस काठमाडौँतिर हिँड्यो ।
यता नारायणघाटमा झलमल्ल तारा देखिएका छन् (एयरब्यागका लागि अधबैंसे र कन्डक्टरको झगडाले गर्दा बस नारायणघाटको पुलचोकमा अड्यो । संयोगवश गस्तीमा हिँडेका उपनिरीक्षक तीन जना प्रहरी साथ त्यहीं आइपुगे । कन्डक्टरले एयरब्याग पहरीको जिम्मा लगायो । निरीक्षणका लागि बसका यात्री सामु एयरब्याग खोलियो । त्यसबाट फलाटिनको बाक्लो लुगाले बेरिएको नवजात तर मृत शिशु निस्कियो । मृत शिशुको घाँटी निलो थियो । प्रहरीहरु बसमा चढे । अब प्रहरी उपनिरीक्षकको आदेशमा बस प्रहरी कार्यालयतिर जाँदैछ ।
मनु ब्राजाकीका अरू रचना
कथा लघुकथा :पुरुष र पेटिकोट
कथा लघुकथा :अमेरिकामा किस्ताबन्दीको सुखी जीवन
कथा लघुकथा :अमेरिकन “बाउ” अर्थात् नेपाली आहा !